Sambaina Antsirabe: nirarakompana ny avandra, simba ny fambolena | NewsMada
Sambaina Antsirabe: nirarakompana ny avandra, simba ny fambolena
Nivalaketraka ireo tantsaha. Nangi-potsy ny tanàna rehetra norarahan’ny avandra omaly tany Sambaina Antsirabe. Manahy ny fiatrehana ny taona manaraka ny tantsaha satria potika avokoa ny fambolena nantenaina rehetra.
Omaly antoandro, niraraka nandritra ny ora iray ny avandra narahina orana tao Sambaina Atsirabe. Nandrakotra ny tampon-tanety sy ny tanimbary izany avandra izany. Potika ny fambolena any an-toerana. Very fanantenana ny tantsaha satria vokatra nandrandraina hiatrehana ny taona ho avy ny potika tao anatin’ny indray mipi-maso.
Anisan’ny potika ny voankazo, toy ny paiso, heverina hiakatra amin’io volana janoary io. Eo koa ny legioma toy ny laisoa, potika tanteraka.
Mariky ny fahapotehan’ny tontolo iainana sy vokatry ny doro tanety tsy mety foana eto Madagasikara ny firaraky ny avandra tafahoatra sy mamotika tsy dia fahita toy izao. Porofon’ny fiovaovan’ny toetr’andro mamely amin’izao fotoana izao ihany koa izany.
Mikasika ny toetry ny andro, araka ny sary hitan’ny mpamantatra ny toetry ny andro amin’ny zanabolana, ahitana rivodoza mihaodihaody indray ao amin’ny ranomasimbe Indianina. I Bouchra ny anarana entin’ity rivodoza ity. Mbola any amin’ny 4 500 km avaratr’i Madagasikara ny misy azy. Tsy misy fiantraikany amin’ny toetry ny andro eto amintsika izany.
Efa hita ho mihalevona tanteraka kosa ilay rivodoza Alcide, omaly, izay tao amin’ny 250 km avaratra atsinanan’i Vohémar. Hitondra orana any amin’ny faritra avaratr’Antsiranana ny rahona entiny hatramin’ny rahampitso.
Hahazo orana tandrifindrahona kosa ny eto Antananarivo sy ny manodidina rah any vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro hatrany. Mila mihomana amin’izany ireo rehetra tsy maintsy hivoaka ny trano indrindra ireo mpianatra mirava rehefa tolak’andro.